Voatohintohina ny fahafaha-maneho hevitra - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny radio sy ny televiziona ary ny internety ahitana ny tambajotra sosialy sy ny tranonkala samihafa no hahafahan’ny olona manara-baovao hatramin’ny nanaovana ny firenena ho « Etat d’urgence sanitaire » tamin’ny 21 marsa 2020, sy nampiharana ny fihibohana na « confinement » hatramin’ny 23 marsa 2020. Vitsy sisa manko ny gazety an-tsoratra amidy ao Antananarivo dia ny « Ao raha » sy ny « L’express de Madagascar ». Marihana koa fa noho ny fivoaran’ny teknolojia dia maro ireo olona misafidy ny hanaraka izay tiany harahina amin’ireo haino aman-jery misy. Tsikaritra ny fisian’ny olona tsy te hihaino na hahita ireo olona sasany mampiasa ny haino amam-jerim-panjakana toa zatra mizahozaho ka manararaotra hatrany ny fampisongadinana ny vondrona na antoko misy azy.
Na izany aza, ny faharahana ny vaovao no zava-dehibe. Amin’izao izany, ny ivom-baovao iraisan’ny eran-tany dia iaraha-mahalala fa ny ady amin’ny areti-mandoza tsy hita maso « coronavirus covid-19 », ary samy manana ny fandaminany ny isam-pirenena amin’ny fiatrehana izany. Ho antsika dia ny fanaovan’ny fanjakana « réquisition » ny radio sy televiziona rehetra no anisan’ny nampiharina ka izay tsy manaraka izany dia iharan’ny lalàna, araka ny nampitain’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina azy. Ny fahitalavitra Real TV no anisan’ny nahazo fampitandremana « mise en demeure » nolazaina fa tsy nampita ny fandaharana nalefa avy amin’ny fampitam-baovao eny amin’ny CCO (Centre de Commandement Opérationnel Covid-19), fa efa nilamina izany. Fa herinandro taorian’izany, ny 7 aprily dia tsikaritry ny mpanaraka ity fahitalavitra ity fa tapaka ny fahitalavitra Real TV. « Mety ho anton’izany ve ny nandefasany ny resadresaka tamin’ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ny alin’ny 6 aprily ? », hoy ny fanontanian’ny olona. Tranga nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao eo amin’ny fahalalahan’ny mpanao gazety koa ny nampidirana am-ponja ny talen’ny famoahana ny gazety « Ny Valosoa vaovao » tamin’ny sabotsy 4 aprily 2020 noho ny fisian’ny filazana ny filoha Rajoelina ho mpamono olona izay efa nitondran’ity gazety ity fanazavana. Io filazana io, araka ny fanazavana hatrany, dia efa niely teny amin’ny tambajotra sosialy no noraisin’ny mpiandraikitra ny www.gvalosoa.com ary tsy tompon’andraikitra amin’izany Arphine Rahelisoa satria efa tamin’ny 21 marsa no nivoaka farany gazety an-tsoratra « Ny Valosoa vaovao ». Nomarihan’ny tompon’andraikitra ihany koa ny faniratsirana ataon’ny mpanao « kaonty fake » any amin’ireo lazaina fa 6%. Nanao fanamarihana momba ity fisamborana ity ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM) Rakotonirina Gerard izay nampitain’ny haino aman-jery tsy miankina samihafa. Nilaza mazava izy fa mifanohitra amin’ny fahalalahan’ny mpanao gazety sy ny zon’olombelona izao fanagadrana izao, ary mifanohitra amin’ny tolona tamin’ny fotoan’androny izay niadiana amin’ny tsy hamonjana mpanao gazety, nitsiahivany ny hetsika tao amin’ilay atao MLE izay nandraisan’ny minisitra anjara mavitrika fony izy mbola tsy minisitra. Taorian’ny fanazavana ny antony tsy mampitombina ny fitoriana sy fampidirana am-ponja an’i Arphine Rahelisoa nataony àry, dia notakian’ny filohan’ny OJM tamin’ny fanambarana nataony tamin’ny 5 aprily ny amoahana ny mpanao gazety Rahelisoa Arphine any am-ponja tsy misy fepetra ao anatin’ny fotoana haingana. Ny mpanara-baovao dia mahatsikaritra fa raha tsikera atao amina tompon’andraikitra ambony ho fampiharana ny tsy fijerena arina an-tava, dia tsy hisy haino amam-jery hivoaka intsony angamba eto Madagasikara, saingy manjaka loatra ilay kajikajy politika amin’ny fanaovana politika maloto eto Madagasikara hatreto sy fanosihosena ny demokrasia. Nanamafy io fitakian’ny OJM io ihany koa ny fikambanan’ny vehivavy mpanao gazety malagasy sy ny hetsika Rohy. Nanao fanamarihana momba io fanohintohinana ny asa fanaovan-gazety io ihany koa ny fikambanana iraisam-pirenena « Reporters sans frontières » sy ny « Union de presse francophone ».
Ao anatin’ity ady atrehina amin’ny « coronavirus » ity, dia manana ny anjara toerany eo amin’ny radio sy ny televiziona ny vavaka, hanohanan’reo mpitondra fivavahana ny fanentanana amin’ny ady atao. Manana fandaharana manokana isan’andro ao amin’ny RNM sy ny TVM, ohatra, ny FFKM amin’izao herinandro masina izao, araka ny fandaminana napetraka izay ifandimbiasana amina fiangonana ao Antananarivo ny fampitana izany, azon’ny radio sy televiziona tsy miankina raisina. Ny RDB sy ny radion’ny diosezy moa dia efa manana ny fandaharany manokana amin’ny vanim-potoanan’ny herinandro masina tahaka izao.
Miova isan’andro ny tarehimarika momba ny olona voakasik’ity aretina « coronavirus » ity. Maneran-tany dia maherin’ny 1 430 000 ireo tratry ny tsimokaretina « covid-19 » raha ny tarehimarika tamin’ny 8 aprily, ary maherin’ny nanika ny 82 000 ireo namoy ny ainy. Ho an’i Madagasikara, dia 93 no mitondra ny otrikaretina tamin’io daty io ihany ka 11 no sitrana, mbola tsy misy kosa ny aina nafoy.
Nanangona : Rasoanjanahary
Chronique de Razaf : Il y a plus urgent - il y a 3 mois